लकडाउनले गर्दा मानसिक समस्या बढ्यो ? मनोविद गोपाल ढकाललाई फोन गरि परामर्श लिनुहोस् – Ktm Dainik
लकडाउनले गर्दा मानसिक समस्या बढ्यो ? मनोविद गोपाल ढकाललाई फोन गरि परामर्श लिनुहोस् - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
लकडाउनले गर्दा मानसिक समस्या बढ्यो ? मनोविद गोपाल ढकाललाई फोन गरि परामर्श लिनुहोस्
८. कन्भर्सन डिसअडर्स – डर, त्रास , तनाबको कारणले देखिने मनोबैज्ञानिक समस्या
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, भदौ २७ २०७७ २०:५७:१७